Amantombazana ukuyambesa Ugqibezelo sokubala intanethi
Amantombazana ukuyambesa Ugqibezelo sokubala intanethi ikuvumela ukuba ukufumana ukuguqula amantombazana ukuyambesa abahlukahlukeneyo American, British, yaseYurophu, ubukhulu Russian, esifubeni nobubanzi nokuphakama ngeesentimitha, okanye ubudala intombazana leyo.
Amantombazana iimpahla nobukhulu sokubala online ikuvumela ukuba uguqule amantombazana ukuyambesa abahlukahlukeneyo American, British, yaseYurophu, ubukhulu Russian, esifubeni nobubanzi nokuphakama ngeesentimitha, okanye ubudala intombazana leyo. Umzekelo, ukuguqula iimpahla bobungakanani namantombazana baseMerika yaseYurophu, ukusuka leBritani Russian njl.njl Kwakhona ungabona amantombazana ukuyambesa Ugqibezelo itshathi, kunye nobukhulu ezinkulu nezincinane.
Guqulela amatakane zihlangu kumazwe ahlukeneyo, njenge yaseYurophu, British, American (USA), ubungakanani Japanese okanye ngeesentimitha.
Iqulathe ezinkulu nezincinane amantombazana iingubo ubungakanani itshathi kumazwe awahlukeneyo.